ငါ့အတွက်သူစဉ်းစားပေးဖို့ဆုတောင်းပါ။ ? နေ့ရောညပါ [ပြန်လာပါ]
ငါ့ကိုစဉ်းစားရန်ဆုတောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လိုချင်ခြင်းကိုခံစားရရန်လိုအပ်မှုနှင့်အတူနေထိုင်သည်၊ ဤသည်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ငြင်းပယ်ခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ထိုလိုအပ်ချက်ကိုထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေလေ့ရှိသည် ဆုတောင်းပဌနာငါ့ကိုစဉ်းစားပါ နေ့ရောညပါပြန်လာပြီးငါ့ကိုခေါ်ပါ
ဆုတောင်းခြင်းသည်အမြဲတမ်းအဖြေဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကဏ္ of အားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။
1 ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်စဉ်းစားသောဆုတောင်းချက်သည်အလုပ်ဖြစ်မည်လား။
ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်စဉ်းစားသောဆုတောင်းချက်သည်အလုပ်ဖြစ်မည်လား။
၎င်းသည်သင့်အားသင်ကိုယ်တိုင်ကိုတွေးတောစေပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်စေရန်၊ ရှာဖွေရန်နှင့်စိတ်ပျက်အားငယ်စေရန်၊ တစ်နေ့လုံး၊
ငါ့ရဲ့ခံစားချက်တွေ၊ ငါ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ၊ အတွေးတွေ၊ သူရဲ့ ၀ ိညာဉ်ကို (သူနာပြုရဲ့အမည်ပြော) ကိုလက်မခံဘဲ၊ ကျွန်ုပ်အနားမှာဘယ်အခြေအနေပဲရှိနေပါစေနေ့ရောညပါလာပါ။
Santa Muerte Lady ၏နာမ၌ကျွန်ုပ်အားပေးပါရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တောင်းဆိုသည် အင်အား ပြီးတော့လုံးလုံးလျားလျားထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်၊ အဲဒီလူကိုငါ့ရဲ့ဘေးမှာရှိနေစေဖို့မင်းကိုအမြဲတမ်းဂရုစိုက်ပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်။
မင်းကိုမလိုချင်ဘူး၊ ငါ့ကိုမင်းဆီခေါ်သွားခိုင်းတယ်။ မင်းကိုငါခေါ်၊ ဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူး၊
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တန်ခိုးရှိသောသူနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ရှိသောသူတစ် ဦး ထံဆုတောင်းရမည်။
Santa Muerte သည်မှန်သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည် အဲဒီလိုလုပ်ဖို့။
မင်းရဲ့နှလုံးသားကိုသက်သာစေပြီးငါ့အနာကိုပျောက်စေနိုင်အောင်ငါမင်းဆီချဉ်းကပ်တယ်။ el Mundo ကျွန်ုပ်အတွက်တောင်းပန်ပါ၊ မင်းရဲ့အကူအညီနဲ့ကရုဏာကိုတောင်းပါ၏၊
ကျွန်ုပ်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဆာငတ်နေစေရန်ကူညီပေးပါ၊ စိတ်ခံစားမှုနှင့်စစ်မှန်သောနှောင်ကြိုးများဖန်တီးရန်ကူညီပါ။ ချစ်မြတ်နိုးရသူ၏နာမကိုပြောပါ။
အမြင့်ဆုံးသောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ထိုက်တန်သောသူ၊ ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးထဲ၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရှာပါ။ ငါနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောဤလူနှင့်အတူပျော်ရွှင်ခြင်းကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေပါ။ သင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကသင်၏နှလုံးသားကိုထိမိပြီးငါ့ထံသို့လာလိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ သင်အံ့ဖွယ်အမှုကိုပြုလိမ့်မည်။
အချစ်က infinito ကျွန်ုပ်၏ကောင်းကင်တမန်မင်း၊ ကိုယ်တော်၏ကြီးမြတ်မှုသည်ကျွန်ုပ်ကိုပြည့်စေပြီးကျွန်ုပ်၏ကျေးဇူးတင်မှုသည်ထာဝရဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ကိုယ်တော်၏နှလုံးသားကိုထိပါ။
ကောင်းမြတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိပါစေ၊ သင်၏မေတ္တာသည်လောကနှင့်သာဖြစ်ပါစေ၊ အာမင်!
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အတည်ပြုချက်ကိုမအတည်ပြုနိုင်လျှင်ပင်ဆုတောင်းခြင်း၏ရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ပါတ်သက်၍ အားကြီးသောအရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့ဖွယ်အမှုပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မမြင်ရသော်လည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်သည်။
အချို့ကထိုယုံကြည်ချက်ကိုကိုင်စွဲထားသည် အလိုဆန္ဒများသို့မဟုတ်အတွေးများကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းပါ အခြားသူများ၏အပြုအမူသည်ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်းအခြားသူများကမူ၎င်းသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာလုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီးအမြင်များစွာရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်လက်မောင်းမတည့်သူကိုလှည့်စားနိုင်သည့်အမှုများတွင်၊ ကျွန်ုပ်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်ုပ်အားစဉ်းစားရန်အတွက်ဤဆုတောင်းခြင်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ လူတိုင်းအတွက်၊ ထို့နောက်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှုန်ဝါးခြင်းနှင့်အကောင့်အသစ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။
“ ယခုငါဒီအချိန်အတိအကျ (လူ၏နာမည်ကိုဖော်ပြသည်) မှာကျွန်ုပ်ကိုရှာပါ၊ သင်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေကျွန်ုပ်ကိုရှာပါစေ။
သခင်၊ ယခုအချိန်မှ စ၍ ကျွန်ုပ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနာမည်ကိုကျွန်ုပ်အားသာအာရုံထားပါရန်ဆုတောင်းပါ၏။ ကျွန်ုပ် မှလွဲ၍ အခြားအရာများကိုမစဉ်းစားနိုင်ပါ။
ဒီနည်းနဲ့မင်းရဲ့ဘဝမှာမင်းကိုလိုအပ်တယ်၊ ငါ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာမပါဘဲနောက်တစ်ရက်မဖြုန်းသင့်ဘူးဆိုတာဒီနည်းနဲ့နားလည်ထားတယ်။ ဤအခိုက်အတန့် (လူ၏အမည်) သည်သင်၏မာနကိုမေ့ပျောက်စေပါ။ ငါ့ကိုခေါ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်အမင်းရှာဖွေပါ။
ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့်ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးကိုငါတောင်းပြန်၏။ MIGUEL, RAFAEL, GABRIEL, သူတို့လက်ကို (သူရဲ့နာမည်) ထည့်ပြီးသူတို့စိတ်ထဲမှတစ်စက္ကန့်ကိုမရနိုင်တော့ဘူး။
သူ၏နှလုံး၊ ခန္ဓာကိုယ်၊ စိတ်နှင့်စိတ်ဓာတ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်သာသက်ဆိုင်ပါစေ၊ သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုသာစဉ်းစားပြီးအလိုရှိစေလို။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဆိုးဆိုးရွားရွားချဉ်းကပ်လိုသူအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်သည်။
ငါ (သူရဲ့နာမည်) ကိုလွှမ်းမိုးရန်နှင့်သူတို့၏အာရုံ ၅ ခုကိုထိန်းချုပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တောင်းပန်သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏စိတ်ထဲမှတစ်စက္ကန့်မှထွက်မသွားနိုင်တော့ပါ။
ငါသည်သင်တို့ကိုငါသွားချင်သောဤလမ်းကြောင်းအပေါ်ငါ့အလမ်းပြဖြစ်အံ့သောငှါ, ဒါကြောင့် (ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏အမည်) ကိုသာငါပိုင်, ဒါကြောင့်သင်ချစ်သောကျော်လွန်။ သွားသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူချဉ်းကပ်ရန်ဆန္ဒရှိသူအပေါငျးတို့ထံမှဝေးရွေ့စေခြင်းငှါသို့မဟုတ်သူဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်သူဆန္ဒရှိ ငါနှင့်ဝေးပါစေသော
နာမတော်ဖြင့်၊ အာမင်။ ”
ကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ခွာသွားသူတစ် ဦး ပြန်လာရန်ဝိညာဉ်ရေးရာအကူအညီတောင်းခံခြင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့သောအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သူတို့မခေါ် la စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်း၏ဆုတောင်းပဌနာ ပြီးတော့သင်ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးစွမ်းအားရှိတယ်.
လူအများစုကသူတို့တစ်ခုထက်ပိုပြီးဆုတောင်းနိုင်မလားမသိဘူး ဆုတောင်းပဌနာ။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟုတ်ကဲ့ပြောနိုင်သည်။
ဆုတောင်းခြင်းတစ်ခုချင်းစီအကြားတွင် ၁ ရက်ခြားသောအချိန်ကိုကျွန်ုပ်အားစဉ်းစားရန်နှင့်တစ်နေ့လုံးနှင့်ယခုအိပ်မက်မက်ရန်ကြိုးစားပါ။